Showing १-७ of ७ items.
इटहरीले गुमायो दुई ठूला योजना
धनबहादुर पुरी इटहरी / प्रदेश १ कै चौरास्त सडकले छोएको उदयीमान शहर इटहरीले यो आर्थिक वर्षमा दुईवटा अत्यावश्यक योजना गुमाएको छ । इटहरीमा अत्यावश्यक रहेको स्मार्ट पार्किङ र आकाशे पुल बन्ने योजना यो वर्षको तुहिएको हो । नेपालमै पहिलोपटक इटहरीमा स्मार्ट पार्किङ निर्माण हुने भन्दै इटहरी उपमहानगरपालिकाले प्रचार गरे पनि काम शुरु नगर्दा यो वर्ष इटहरी सरकारलाई आएको साढे ५ करोड रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । यो वर्ष बनिसक्ने पार्किङको सामान्य कामसमेत शुरु नभई बजेट फ्रिज भएको हो । पार्किङ समस्याले टाउको दुखाइ बन्दै आएको इटहरी उपमहानगरपालिकामा अधिकांश ग्राहक तथा सर्वसाधारणले सडकमै पार्किङ गर्दै आएका छन्
प्रकाशित मितिः असार ११, २०७७
इटहरीका मेयरले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाए
इटहरी / इटहरीका मेयर द्वारिकलाल चौधरीले इटहरी १० मा सडक अतिक्रम गरेको भन्दै सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएका छन । इटहरी १० ल्याण्डफिल्ड साईड जाने कालोपत्रे सडक आसपासमा बस्दै आएका केही घरमा शनिबार विहान मेयर चौधरी आफैले डोजर लिएर बस्ती भत्काएका हुन । लामो समय देखि ल्याडफिल्ड जाने बाटो अतिक्रमण गरेर बस्दै आएका सर्वसाधरणहरुको घरमा डोजरले घर भत्काई दिएका हुन । डोजर, नगरप्रहरी, नेपाल प्रहरी र दमकलसमेत लिएर बस्ती भत्काउन पुगेको इटहरीका मेयर तीन घर भत्काएर फर्किएका थिए । तीन बर्षदेखि मौखिक निर्देशन नमाने पछि अहिले घर भत्काएको मेयर चौधरीले बताए । सडक क्षेत्रको जग्गामा बाटो अतिक्रमण गरेर बनाएको घर
उठेन फोहोर, दुर्गन्धित इटहरी
इटहरी/ निजी संस्थाले बिहानभरि लगाएर सङ्कलन गरेको फोहोर ट्याक्टरमै थन्किएपछि इटहरी दुर्गन्धित भएको छ । तीन दिनदेखिको फोहोर नफाल्दा समस्या उत्पन्न भएको हो । इटहरी उपमहानगरपालिकाले फोहोर फाल्ने ठाउँको व्यवस्था नगर्दा फोहोर सङ्कलन गरेर पनि फाल्न नपाएको निजी संस्थाले जनाएको छ । लोड गरेको फोहोर फाल्ने ठाउँ नपाएपछि ट्याक्टरमा सङ्कलित फोहोर इटहरी उपमहानगरपालिका प्राङ्गणमा राखिएको छ । फोहोर लोड गरेका ट्याक्टर रातभर त्यहीँ रहेका छन् । लामो समयदेखि फोहोर फाल्दै आएको ठाउँ चारकोसे झाडीमा विवाद बढेपछि अहिले फोहोर फाल्ने ठाउँ नहुँँदा फोहोर उठ्न नसकेको हो । वेस्ट एण्ड इन्भारोम्यानेजमेण्टका व्यवस्थापक भरत गि
प्रकाशित मितिः माघ १७, २०७६
इटहरी सरकार हामीलाई लाइसेन्स देऊ !
इटहरी / ।विद्युतीय रिक्सा (सिटी सफारी) का चालकहरुले आफूहरुलाई चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) दिनुपर्ने माग गदैं उपमहानगर घेराउ गरेका छन् । लामो समय देखि सफारीको लाइसेन्स नभएको भन्दै चालकहरुले आफुहरु लाइसेन्स नपाउदा पिडित भएको बताएका छन । उनीहरुले स्थानीय सरकार विरुद्ध इटहरी उपमहानगरपालिमा धर्नासमेत दिएका छन । आइतबार सफारी चालकहरुले लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया झनझटिलो भएको भन्दै स्थानीय सरकारबाट लाइसेन्स वितरणको माग गरे । लामो समय देखि सफारी कुदाउँदै आएका उनीहरुले स्थानीय सरकार विरुद्ध नाराबाजी समेत गरे । स्थानीय सरकार आए पनि सरकारको अनुभुती नभएको भन्दै स्थानीय सरकारको राजीनामासमेत माग गरे । उनी
प्रकाशित मितिः पुष २०, २०७६
इटहरी उपमहानगर कार्यालय ठप्प, सेवाग्राही मारमा
इटहरी / बुधबार इटहरी उपमहानगरपालकिाका मेयर द्वारकिलाल चौधरीले कर्मचारीलाई दुव्यवहार गरेको भन्दै आज उपमहानगरपालिकाको काम काज ठप्प पारेका छन् । इटहरी उपमहानगरपालिका भरिकै कर्मचारीहरु अहिले कार्यालय नै नखोलि नगर परिसरमा आन्दोलन गरिरहेका छन् ।कार्यालय परिसर बाहिर कर्मचारीको बाक्लो भिड लागेपछि सुरक्षाका लागि शसस्त्र प्रहरी खटिएका छन् । कार्यालय नखुले पछि सेवाग्राहीहरुको पनि भीड लागेको छ । उपमहानगरपालिकाका मेयर चौधरीले इटहरी १९ का वडासचिव मनोज दाहाल र उपमहानगरपालिकाका सब ओभरसियर राम खड्कामाथि हातपात गरेपछि कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । घट्नाको विषयमा बुझ्न मेयरलाई भेट्न पुगेका पत
६६४ पटक पढिएको
इटहरी उपमहानगरलाई विज्ञको सुझाब
इटहरी/सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकाका विज्ञ सल्लाहकारहरुले दीर्घकालिन योजना बनाएर अघि बढ्न उपमहानगरलाई सुझाब दिएका छन । विज्ञ सल्लाहकार समूहको वैठकमा विज्ञहरुको विषयगत समूह बनाएर सुझाब लिदा राम्रो हुने सल्लाह दिएका छन् । इटहरीको प्राथमिकता निर्धारण गरि अन्य स्थानीय तहभन्दा फरक र नमूना योग्य बनाउन ध्यान दिन सुझाब दिएका छन् । नमूना बस्तिको विकास गर्न,लगानी सम्मेलन गर्न,रातिसम्म पनि बजार खुल्ने गरि शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । यसैगरि गौरबका आयोजना सञ्चालन गर्न, नागरिक मैत्री सेवा दिन सुझाब दिइएको छ । विज्ञ सल्लाहकार समूह गठन गरेर सुझाब लिन थालिएकोमा वैठकमा उपमहानगर
५३६ पटक पढिएको
मेयरको निर्देशनमा इटहरी उपमहानगरका वडाअध्यक्षसहित दुई प्रहरी नियन्त्रणमा
इटहरी । सार्वजनिक बाटोमा मनपरी गरेको भन्दै इटहरी उपमहानगरपालिकाले आफ्नै वडाअध्यक्ष सहित दुई जनालाई पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ । सार्वजनिक कल्र्भटमा क्षति पुर्याएकाे भन्दै इटहरीका मेयर द्धावारिकलाल चौधरीले इटहरी १५ का वडाध्यक्ष सर्वन चौधरी र स्थानीय अमित चौधरी विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेका हुन । कल्र्भट भाँचेको भन्दै मेयरले उनीहरुलाई पक्राउ पूर्जी जारी गरी इलाका प्रहरी कार्यलयलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएको थियो । उनीहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । बिहान इटहरी १५ को अनुगमनमा निस्किएका मेयर चौधरीले बाटोमा कल्र्भट भत्किएको देखेपछि आक्रोशित बनेका थिए । उनले तत्कालै प्रहरीलाई खबर गरी वडाध्यक्षला
प्रकाशित मितिः मंसिर २२, २०७५
८२४ पटक पढिएको